समाचार प्रभाव : असहायलाई नयाँ घर- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
अछाम — भत्किन थालेको सानो झुपडीमा २ छोराछोरी च्यापेर आधा पेट रात काट्ने मंगलसैन नगरपालिका ७ की कलु उपाध्यायको सधैं अध्याँरो देखिने अनुहारमा अहिले चमक देखिन्छ । यतिबेला उनलाई कहाँ बसुँ भन्ने झर्को छैन ।
गत फागुनमा कान्तिपुरमा उनले भोग्दै आएको कठिनाइबारे समाचार प्रकाशन गरेपछि उनको घर बनाउन सहयोग जुट्न थाल्यो । अफ्रिकामा रहेका अछामको मंगलसैन नगरपालिका ३ का भरत बोगटीले समाचार पढेपछि उनलाई सहयोग जुटाउन अग्रसर भए । नेपालमा रहेका साथीहरूलाई पनि जानकारी गराएर रकम जुटाउन थाले ।
‘मैले एक्लैले सामान्य सहयोग गर्ने कि भनेर सोचेको थिएँ । साथीहरूले अलिकति हामी पनि सहयोग गर्छौं भनेपछि सबै लाग्यौं,’ उनले भने, ‘शोडषा भूतपूर्व विद्यार्थी समाजले अभियानै चलायो ।’ जुटाएको सहयोग रकमबाट कलुको ४ कोठे घर बनेको छ ।
घर निर्माण गर्न ४९ हजार शोडषा भूतपूर्व विद्यार्थी समाजले जुटायो । ‘फजुल खर्च घटाएर सहयोग गर्‍यौं,’ अध्यक्ष शंकर भण्डारीले भने । विद्यार्थी समाजकै आग्रहमा मंगलसैन नगरपालिकाले समेत १ लाख उपलब्ध गराएको नगरपालिकाका उपप्रमुख सरिता उपाध्यायले बताइन् ।
उनका अनुसार अछामका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्य, हालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज श्रेष्ठ, प्रहरी प्रमुख (डीएसपी) जनकबहादुर शाहीले समेत घर निर्माणमा सहयोग गरेका थिए । नयाँ घरमा बस्न सुरु गरेकी कलुले हातको इसारा गर्दै खुसी व्यक्त गरिन् । ‘अब अरूको घरमा बास माग्न जानुपर्ने दुःखका दिन गए । मेरो घर बनाइदिने सबैलाई धन्यवाद,’ उनले भनिन् ।
सदरमुकाम मंगलसैनबाट ३ घण्टाको दूरीमा रहेको खेताडा गाउँको एक छेउमा उमेरले ४६ वर्ष पुगेकी उनी न हिँड्न सक्छिन् न राम्रोसँग बोल्न । मंगलसैन ७ का गोरे पाध्यायले उनीसंँग बिहे गरेको १५ वर्ष भयो । त्यतिखेर कलु र गोरेको उमेर ३१ वर्ष फरक थियो । गोरेका २२ वर्षीया एक्ला छोराको मृत्यु भएपछि उनले अर्को विवाह गर्ने निधो गरे ।छोराको मृत्यु अघि नै पत्नीको मृत्यु भएको थियो ।
गोरे पाध्यायलाई विवाह गर्न समाजले दबाब दिन थाल्यो । छोरा नभए अपुताली हुन्छ भन्ने मान्यताले गोरे अर्को बिहे गर्न बाध्य भए । नभन्दै उनका वर्षदिनको अन्तरमा २ छोरा र एक छोरी भए । ०७४ साउनमा गोरेको मृत्यु भयो । पतिको मृत्युपछि कलुका दुःखका दिन सुरु भए । जेठा छोरा विनोदको उमेर १३ वर्ष भयो ।
कापी, कलमको जोहो गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि ५ कक्षा पढेर स्कुल जान छोडेर भारतमा चौकीदारी गर्न गएका छन् । कान्छो छोरालाई गाउँका मान्छेले पढाइ दिन्छौं भनेर कता लगे पत्तो छैन,’ कलुले इसारा गर्दै भनिन्, ‘अनाथलयमा राखेको छ भन्ने सुन्छु । तर कहाँ छ । कस्तो अवस्थामा छ मलाई केहि पनि थाहा छैन ।’
प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०९:५७
भाद्र १३, २०७६ तृप्ति शाही
बैतडी — जिल्लामा भाइरलका बिरामी बढेका छन् । भाइरल ज्वरो, रुघाखोकी र टाउको दुख्नेका बिरामी साउनबाटै देखिन थालेका हुन् । जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसँगै अन्य स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि पुग्ने बिरामीको चाप बढेको छ ।
अहिले जिल्ला अस्पतालमा मात्रै दैनिक ३५ बढी भाइरल ज्वरोका बिरामी मात्र आउने गरेको मेडिकल अफिसर डा. वसन्तराज जोशीले बताए । उनले भने, ‘केही साता भयो, अस्पतालमा आउने बिरामीमध्ये आधा त भाइरलका मात्र आउने गरेका छन् । ७० भन्दा बढी बिरामी दैनिक आउँछन् त्यसमा आधाभन्दा बढी ज्वरो र टाउको दुख्नेका आइरहेका छन् ।’
यस्तै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटनमा पनि भाइरलका बिरामी बढेका छन् । भाइरलसँगै टाइफाइडका बिरामी आउने क्रम बढेको दशरथचन्द नगरपालिका ९ को जोशीवुंगा स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज शिवकुमार कठरियाले बताए । अहिले गाउँघरमा धेरै जसोलाई एकै प्रकारको लगातार ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने र वान्ता हुने रोग देखिएको दशरथचन्द नगरपालिका ४ कि सुनीता भण्डारीले बताइन् ।
मौसम परिवर्तनले सबैलाई एकैपटक भाइरल देखिएको जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा. जगदीशचन्द्र विष्टले बताए । ५ देखि ८ दिनसम्म बिरामीलाई यो समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ । दैनिक ३ भन्दा बढी बिरामी जिल्ला अस्पतालमा मात्र भर्ना नै हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘रोगसंँग लड्ने क्षमता कम भएकालाई भाइरलले सताउने गरेको छ,’ डा. विष्टले भने, ‘अलि बढी दिनसम्म देखिन्छ । केहीलाई भने कमै दिनमा पनि ठीक हुने गरेको छ ।’ यसबाट जोगिन पानी उमालेर खाने, भीडभाड भएको ठाउँमा नजानेलगायत सावधानी अपनाउन जरुरी रहेको उनले बताए ।
आईयूसीडी प्रयोक्ता बढे
पाटन नगरपालिका १ का धेरैजसो महिला आईयूसीडीको प्रयोग गरिरहेका छन् । वडामा रहेको सकार स्वास्थ्य चौकीमा २०७४ साल बाट यो परिवार नियोजनको अस्थायी साधनको सुविधा आएपछि प्रयोग गर्नेहरूको संख्या बढेको हो ।
अन्य अस्थायी साधनभन्दा यो बढी मात्रामा खपत भएको छ । वडाको स्वास्थ्य संस्थामा परिवार नियोजनका अस्थायी साधन पिल्स, डिपो, इम्प्लान्ट र आईयूसीडी गरी ४ प्रकारका साधन उपलब्ध छन् । तर त्यहाँका महिलाहरूको पहिलो रोजाई आईयूसीडीनै पर्ने गरेको छ ।
३ छोरी र १ छोरा गरी ४ सन्तानकी आमा ३५ वर्षिया दमयन्ती भट्टराई पनि सबैभन्दा पहिले आईयूसीडी राख्ने समूहकी महिला हुन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूले बुझाउँदा धेरै समयसम्म काम गर्ने साधन प्रयोग गर्दा राम्रै होला भनेर राखेको उनले बताइन । उनले अरु साधन भन्दा यस्ले राम्रो गरेको र अहिले धेरै सजिलो लागेको भन्दै खुसी व्यक्त । उनले भनिन्, ‘अरु साधन जस्तो दैनिक र महिनामा बदल्न पर्दैन ।’
‘एकपटक राखेपछि वर्षौंसम्म ढुक्क भइन्छ । अहिले सबैको मन जित्यो हाम्रो, अनि सबै भन्दा धेरै हाम्रो गाउँमा प्रयोगमा आउने गरेको छ’ दमयन्तीले भनिन ‘यसले कुनै नराम्रो असर पनि गरेको छैन आज सम्म ।’ आफुहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूले यसबारे जानकारी गराएको भन्दै उनले अरु दिदीबहिनीहरूलाई आफुहरूले यसको फाईदाका बारेमा भन्दै गएकोले पनि प्रयोग गर्नेहरू बढेको बताईन् ।
श्रीमान्ले कण्डम प्रयोग गर्न आनाकानी गर्ने गरेको बताउँदै अर्की स्थानीय पद्मा भट्टराईले पिल्स खान र डिपो लगाउँन झन्झट लाग्ने गरेको बताईन् । दिनदिनै खानुपर्ने पिल्स र ३ महिनामा लगाइ हाल्नुपर्ने डिपोले हैरान भएकी उनले आईयूसीडी राखेपछि धेरै वर्षको लागि सजिलो भएको बताईन् । उनले भनिन्, ‘वर्षौ सम्म चिन्ता छैन । असर पनि कुनै गरेको छैन । अनि सबैले यहि मागेका छौ ।’
२०७४ को साउन म हिना बाट सुरु भएको सेवामा सुरुमा ८ जना महिलाहरूले मात्र राखेका स्वास्थ्य चौकीका अहेव नरेन्द्ररराज भट्टराईले बताए । दिदीबहिनीहरूलाई धेरै सम्झाइ , बुझाइ गरी राखेको सम्झदै उनले भने, ‘पछिल्लो समय त आफ्नै राखिदिन पर्‍यो भनेर आउनुहुन्छ ।’ आमा समूहमा स्वास्थ्यकर्मीहरू गएर धेरै जानकारी दिँदा मात्र महिलाहरू यसप्रति आकर्षित हुन पुगेका उनले बताए । ‘स्वयंसेविकाहरू लगायतले सहयोग गर्दा यो अवस्थामा पुगिएको हो’ उनले भने ।
५ सय ८७ धरधुरी रहेको उक्त वडामा आव २०७४/७५ मा १ सय १७ जना महिलाहरू आईयूसीडीको प्रयोगकर्ता रहेका उनले बताए । यस्तै ७६ जनाले पिल्स, ३८ जनाले डिपो र २९ जनाले इम्प्लान्टको प्रयोग गरेका थिए ।अहिल आइयूसीडी प्रयोग गर्नेहरूको संख्या बर्षेनी बढिरहेको छ । आव २०७५/७६मा १ सय ६२ जना र चालु आवको अहिलेसम्म १ सय ६७ महिलाले आयूसीडी प्रयोग गरिरहेको सकार स्वास्थ्यचौकीको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
जिल्लाको सबैभन्दा बढी आईयूसीडी प्रयोग हुने स्थान पाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर १ नै भएको स्वास्थ्य कार्यालयमा परिवार नियोजन सुपरभाइजर डिल्लीरमण जोशीले बताए । स्वास्थ्यकर्मीको पहलमा यो संम्भव भएको उनको भनाई छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले आफ्लैे प्रयोग गरेर अरुलाई गर्न भनेकोले पनि बढेका उनको धारणा थियो ।
अन्य ठाउँमा राखेपनि कमले मात्र राख्ने गरेका उनले बताए । इम्प्लान्ट, डिपो र पिल्सको बढी प्रयोग जिल्लाका अन्य ठाउँमा हुने र आईयूसीडी न्यून मात्रामा हुने जोशीले जानकारी दिए । जिल्लाका अन्य स्थानका इम्प्लान्ट धेरै राख्ने तर आईयूसीडी राख्न नमान्ने गरेको मेरी स्टोप्स यूएनएफपीए बैतडीकी प्रोजेक्ट अफिसर कलापती चौधरीले बताइन् ।
प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०९:५६